Basket Centrifuge, Drum Kala Magnetic - Stamina
Waxaan diiradda saareynaa baaritaanka macdanta naqshadeynta iyo soo-saarista, xirfad u leh alxanka iyo farsamaynta farsamada ee la xiriira qalabka dayactirka qalabka macdanta Waxaan ku ururinay khibrad aad u badan qaybaha macdanta habka been abuurka ee ku saabsan berrinka dhuxusha iyo qalabka diyaarinta.
QALABKA MAKIINADDA QAABKA AY SAMEEYN KARAAN
IDIIN LEEYAHAY TALLAABO KASTA OO WADA.
Laga soo bilaabo xulashada iyo qaabeynta midig
mashiinka shaqadaada si ay kaaga caawiso inaad maalgeliso iibsiga oo abuuraya faa'iidooyin muuqda.
Magaca: Waxqabadka Caleenta Suunka ...
Qaybaha alxanka warshadaha culus
Magaca: alxanka culus ...
Sanduuqa kala-goynta magnetic
Magaca: Kala soocista magnetic ...
Waxqabadka: Waxaa loo adeegsaday Macdanta E ...
Qaybaha makiinadaha warshadaha culus
Waxqabadka: Loogu Adeegsaday Culayska ...
Magaca: Basket Centrifuge Basket Fu ...
Magaca: Wadista Shaqada ...
Waxqabadka: Waxaa loo adeegsaday Macdanta ...
Yantai Stamina Macdanta Qalabka Co., Ltd oo la aasaasay sanadka 2009, oo ku yaal Yantai, Shandong, oo ah magaalo deked furan oo ku taal Shiinaha.
Waxaan khibrad u leenahay khabiiro alxamid aqoon u leh heerka alxanka caalamiga ah (DIN standard, AS standard / JIS standard / ISO standard…), oo leh talaabooyin ogaanshaha cillad cillad alxanka.
Diisambar / 21/2020
Bandhigga Gu'ga Shiinaha ayaa aad u dhow, Johan iyo Jason ayaa halkan uga duulaya Australia. Xilliga xagaaga waa hadda Australiya, waxay xirtaan funaanad gacmo-gaaban oo ku dhex jirta jaakadooda qaro weyn waxay noo keenayaan hadiyad diiran, waa mashruuc weyn! Saddexda maalmood ee mashquulka ah halkaan ayey joogaan, waxaan si qoto dheer uga wada hadalnay ...
2020 waa sanad gaar ah, COVID-19 wuxuu ku faafayaa aduunka oo idil laga bilaabo bilowga sanadka
Si lama filaan ah, 2020 waa sanad qaas ah, COVID-19 wuxuu ku faafayaa adduunka oo dhan bilowga sanadka. Dadka Shiinaha oo dhami waxay ku noolaayeen xaflad aan caadi ahayn oo guga aamusnaan ah, waxna kama cunaan waxna kama iibsan karaan, lama kulmin saaxiibo ama booqashada qaraabada. Aad ayey uga duwan tahay sidii hore！ Thanks to Chin ...
2020 waa sanad miro dhal u ah Stamina, sidee nasiib wanaag ah
Waxaan ku dhamaynay mashruucii balaadhnaa ee ka yimid Australia waqtigii loogu talagalay, macmiilkeenu wuxuu qabanayaa shaqadooda golaha hada. Waxay noo bilaabeen mashruuc cusub oo la mid ah annaga oo aan shaki ku jirin dhowr maalmood ka hor, xitaa iyaga kama wada hadlaan wax su'aal farsamo ah, kaliya na tuur sawirada. Sidoo kale waa durbaan, laakiin kala badh dhululubo, m ...